Izinto zokucoca iindevu: fumana iimodeli ezintle kwimarike | Amadoda aQinisekileyo
Ukunyuka kweendevu kubeke izixhobo zokucheba iindevu phakathi kwezona zixhobo zibaluleke kakhulu kwimpahla yamadoda yococeko. Kwaye kunjalo Iinwele zobuso kufuneka zichetyiwe kwaye zichetywe rhoqo ukhangeleka ungenasiphako yonke imihla.
Fumanisa Yeyiphi imodeli efanelekileyo ngokufanelekileyo iimfuno zakho phakathi kwexabiso elifanelekileyo kwimarike. Zombini ezifikelelekayo kunye naphakathi kwinqanaba kunye neemodeli zokugqibela eziphezulu. Ezinye zeenjongo ezininzi kwaye ezinye zigxile kugcino lweendevu.
1 Izinto zokucheba iindevu ezingabizi kakhulu
2 Ukucheba iindevu eziphakathi
3 Ukucheba iindevu eziphezulu
4 Uyisebenzisa njani into yokucheba iindevu
Izinto zokucheba iindevu ezingabizi kakhulu
UPhilips MG3730 / 15
Ukuba ujonge isicheme esinexabiso eliphantsi esetyenziselwa izinto ezininzi, jonga UPhilips MG3730 / 15. Kubandakanya iindevu ezintandathu kunye neekama zeenwele (1-16mm), impumlo kunye nokusika iinwele, kunye necala lokuhamba. Ukusebenza kwayo ngaphandle kwamacingo emva kwentlawulo epheleleyo yimizuzu engama-60.
La UPhilips QT4015 / 16 Inoyilo olunomtsalane, i-90 yemizuzu yokusebenza ngaphandle kwentambo kwaye isebenza kakuhle ngakumbi ngekama, nge-0.5 mm yeyona ndawo iphantsi yevili layo eliphakathi. Nangona kunjalo, ubude bayo bu-10 mm. Jonga ubude obukhulu bokusika umatshini ukuze uqiniseke ukuba iyahambelana neendevu zakhoNgokukodwa ukuba unentshebe ephakathi okanye ende.
Ukuba ufuna isilevu esinexabiso eliphantsi esisika ukuya kuthi ga kwi-20mm, jonga IBraun BT 5070. Inika ukuya kuthi ga kuma-25 okusika ubude ngokusebenzisa iikhombu zayo ezimbini, enye yeentsuku ezintathu kunye neendevu ezimfutshane kunye nenye yeendevu eziphakathi. Ukusebenza kwayo ngaphandle kwamacingo yimizuzu engama-50.
Ukucheba iindevu eziphakathi
La UPhilips BT5200 / 16 es enye yezinto zokucheba iindevu ezilinganisiweyo ngenxa yexabiso elifanelekileyo lemali. Imizuzu engama-60 yokusebenza ngaphandle kwentambo kunye neendawo ezili-17 zokusika (0.4mm ukuya kwi-10mm) ezilungiselelwe kwivili lesiginitsha yebhanti.
La I-Remington HC5810 Pro yeCeramic ePhambili es imodeli ekufuneka uyiqwalasele yokugcina iindevu eziphakathi kunye nezinde kunye neenwele ezisikiweyo. Ibandakanya iikhombisi ezilishumi, ezingama-40 mm yeyona inde kakhulu. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukusikwa kwayo okusondeleyo ngaphandle kwekama yi-0.8 mm, ke ayingxami ngokungafaniyo nezinye iimodeli xa kufikwa kwisitayile seendevu kunye nemadevu.
Ukuba ujonge i-mid-range ndevu yokucheba esebenza ngeendlela ezininzi, la IBraun MGK3080 ngumzekelo wakho. Ukongeza ekugcineni iindevu ezingenasiphako zeentsuku ezintathu, ezimfutshane kunye neziphakathi (i-0.5 ukuya kwi-21 mm), ibandakanya izixhobo zeempumlo kunye neenwele zendlebe, ukuthambisa umzimba kunye nokuhamba. Enye into eye yanceda ukuba ibe ngumthengisi ophambili kukuba inokusetyenziselwa ishawa.
Ngenkqubo yokutsala, inkqubo ye- UPhilips 7000 Uthotho BT7201 / 16 ikunika ithuba lokutsiba inyathelo lokucoca. Ukongeza kokungabikho kobumdaka, ineendawo ezingama-20 zokusika (0.5mm ukuya kwi-10mm) kunye nemizuzu engama-60 yokusebenza ngaphandle kwentambo.
Ukucheba iindevu eziphezulu
UPhilips HC9490 / 15
Ukuba ufuna iindevu zokucheba, qwalasela uthotho lwePhilips 9000. Inkqubo ye- UPhilips HC9490 / 15 inikeza akukho ngaphantsi kwama-400 iindawo zokusika ngokuchaneka kwe-0.1 mm. Elona nani liphezulu lingu-42mm, ke isebenza ngokugqibeleleyo ngeendevu zabo bonke ubude. Inemizuzu engama-180 yokusebenza ngaphandle kwentambo, isantya sokusika i-turbo, isiseko sokutshaja, iitayi zethanium, imemori kunye ne-interface yexesha elizayo. Ngokwendalo, inokusetyenziselwa ukunciphisa iinwele.
La UPhilips BT9297 / 15 ijolise ngakumbi kwiindevu. Dibanisa a Isikhokelo se-laser ukucacisa iindevu ngokulinganayo kunye nokubonisa i-LED. Isetyenziselwa iintsuku ezintathu kunye neendevu ezimfutshane, kuba uluhlu lwayo lokusika luqala ukusuka kwi-0.4 ukuya kwi-7 mm kumgama we-0.2 mm.
Uyisebenzisa njani into yokucheba iindevu
Sebenzisa iindevu zokuthambisa kunye neeshampu ezisusa iiseli ezifileyo kunye nokungcola Inceda ikama ukutyibilika ngokutyibilika ngakumbi kwizinwele zobuso. Eli xesha lokugcina ixesha kunye nokuchasana notsalo kubaluleke ngakumbi ukuba unentshebe engqindilili okanye ende, okanye zombini.
I nyaniso ukuba umatshini ulayishwe kakuhle, ucocekile kwaye uthambisile ikwanegalelo ekwandiseni amava okusika iindevu. Ukupasa kufuneka kusoloko kuchasene neenkozo.
Xa usebenzisa iindevu zokucheba okokuqala, Qala kwesona sikhundla sinde kakhulu kwaye usebenze ngendlela yakho ezantsi de ufumane inombolo oyifunayo. Olu lumkiso lincinci luya kukuhlangula kwinto engathandekiyo yokucheba iindevu zakho kunokuba kufanelekile kwaye ulinde ukuba ikhule kwakhona.
Abanye abantu bayazichaza iindevu zabo ngaphambi kokuba bazichebe, ngelixa abanye bekhetha ukuyenza emva koko. Logama nje ugcina engqondweni ulingano kunye umgca wezihlathi, isilevu nentamo ziyahambelana nemilo yobuso bakho, Nokuba ungayalelwa njani.
Ukuma intshebe ungasebenzisa iindawo ezahlukileyo zokusika ezidleleni, kumadevu nakwisilevu. Jonga ude ufumane ubuchule bakho bokucheba kunye nesimbo esikufanelayo. Umntu ngamnye unendlela yakhe yokwenza izinto, kunye nokucheba iindevu akufuneki kube njalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Eyona ndlela yokucheba iindevu
Uyenza njani i-mojito